Nepali Sangsar | Read online latest news and articles ...
मन्दिर जाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएकी महिला यी रहेछिन, भोकै मन्दिर गएकी…
नेपाली संगसार access_time2दिन अगाडि
साउनको महिना भगवान शिवको वर्त वस्ने पवित्र महिना हो । भगवान शिवको पुजा र ब्रतको लागि कतिपय भक्तहरु निकै कठोर नियम पालना गर्छन । बाँकेको नरैनापुर ५ मा सन्तानेश्वर महादेवको मन्दिर छ । त्यहाँ अहिले पर्यटकिय हिसावले पनि निकै चहल पहल हुने गरेको छ । बाँके जिल्लामा एक जना महिला…
नेपाली संगसार access_time 1 हप्ता अगाडि
काठमाडौं। हाँस्य टेलिसिरियल ‘सक्किगोनि’मा ‘रक्षा’को भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी रक्षा श्रेष्ठ कार्यक्रममा फर्किएकी छन्। उनी बिहिबार प्रशारण हुने नयाँ भागबाट कार्यक्रममा देखिनेछिन्। झण्डै १५ महिनापछि उनी ‘सक्किगोनि’ मा फर्कन लागेकी हुन्। उनको भूमिकालाई दर्शकले निकै मन पाएका थिए। तर, आमा बन्ने भएपछि उनले केही समयका लागि ब्रेक लिएकी थिइन्। उनी…
धेरै खाँदा तौल बढ्ने चिन्ता लाग्छ ? उसोभए भए ढुक्कले खानुस् यी…
नेपाली संगसार access_time2हप्ता अगाडि
कसै-कसैलाई अलिकति बढि मासु, चिल्लो अनि गुलियो खानेकुरा खानेबित्तीकै तौल बढ्ने समस्याले सताइरहेको हुन्छ भने कसै-कसैलाई जति खाएपनि जस्ताको तस्तै हुने हुन्छ। यो सबै मानिसको शरीरअनुसार भर पर्ने कुरा हो। कसैको शरीरले खानेकुराको क्यालोरीलाई सजिलै पचाउन सक्छ र तौल बढ्ने डर हुँदैन, तर कसैको शरीरमा क्यालोरीलाई पचाउन सक्ने क्षमता कमजोर…
काठमाडाैं । विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाएका सहयोग कलाकार नायक पल शाहले महोत्तरीको अति विपन्न मुसहर बस्तीमा पुर्‍याउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट पठाएका सहयोग कलाकार शाहले महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–१० भरतपुरस्थित अति विपन्न मुसहर बस्तीमा पुर्‍याउनु भएको हो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले…
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविरल वर्षाका कारण उत्पन बाढी पहिरोबाट थप जनधनको क्षति हुन नदिन समन्वयात्मक ढंगले कार्य गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका…
काठमाडौं । भर्खरं मात्र स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । २४ जेठमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हुन् ।…
निषेधाज्ञामा जनतालाई घरमा थुनेर गजुरीका वडाध्यक्ष भिड लिएर घुमघाममा !
साउनको महिना भगवान शिवको वर्त वस्ने पवित्र महिना हो । भगवान शिवको पुजा र ब्रतको लागि कतिपय भक्तहरु निकै कठोर नियम पालना गर्छन । बाँकेको नरैनापुर ५ मा सन्तानेश्वर महादेवको मन्दिर छ । त्यहाँ अहिले पर्यटकिय हिसावले पनि निकै चहल…
काठमाडौं। हाँस्य टेलिसिरियल ‘सक्किगोनि’मा ‘रक्षा’को भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी रक्षा श्रेष्ठ कार्यक्रममा फर्किएकी छन्। उनी बिहिबार प्रशारण हुने नयाँ भागबाट कार्यक्रममा देखिनेछिन्। झण्डै १५ महिनापछि उनी ‘सक्किगोनि’ मा फर्कन लागेकी हुन्। उनको भूमिकालाई दर्शकले निकै मन पाएका थिए। तर, आमा…
काठमाडौं । यस वर्षको युरोकप फुटबल प्रतियोगिता भोलिदेखि शुरु हुंदैछ। जुन ११ देखि जुलाई ११ सम्म युरोपका विभिन्न शहरमा युरोकप खेलिंदै छ। युरोकपको १६ औं संस्करण युरोपका विभिन्न देशका ११ शहरमा आयोजना हुँदैछ। प्रतियोगिता सुरु भएको ६० वर्ष पुगेको अवसरमा युरोपका ११ शहरमा आयोजना गर्न लागिएको हो। यसैबीच युरोकप खेलिने…
काठमाडाैं । नेपाल टेलिकमले ‘एफटिटिएच डबल मज्जा अफर’ सार्वजनिक गरेको छ । घरमा पनि इन्टरनेट, मोबाइलमा पनि इन्टरनेट नारासहित एफटिटिएच डबल मज्जा अफर ल्याइएको हो । यस अफर अन्तर्गत वार्षिक १३ हजार रूपैयाँमा २० एमबीपीएस वा सोभन्दा बढीको एफटिटिएच सेवा…
९४ वर्षकि यी बुढी आमा जो भुत घरमा एक्लै बस्नुहुन्छ,…